Grace K Beauty & Spa | မြန်မာ အလှအပ လမျးညှနျ Myanmar Beauty Guide Drecome Beauty
Grace K Beauty & Spa | Hlaing
Grace K Beauty & Spa
Grace K Beauty & Spa ကို အမှတ် ၂၅ ၊ဗဟိုလမ်း ၊၁၃ ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့ နယ် ၊ရန်ကုန်မြို့ တွင် 2016 ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆိုင်တွင် သတို့သမီးမိတ်ကပ် ၊ဘွဲ့မိတ်ကပ်များ အလှပြု ပြင်ပေးခြင်း ၊ဆံပင်ညှပ် ပေါင်းတင်၊ လျှော်၊ ကောက်၊ ဖြောင့်၊ ဆေးဆိုးပေးခြင်း ၊မျက်နှာသန့်စင်၊ ချေးချွတ်ပေးခြင်း ၊ Nail Arts စသည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ အမျိုးသမီးသီးသန့် ဆိုင်လေးဖြစ်ပါသည်။ မနက် ကိုးနာရီ မှ ည ကိုးနာရီ အထိ ပိတ်ရက်မရှိ ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်။ Promotion အစီအစဉ်များအနေဖြင့် Gift များပေးလျက်ရှိပါသည်။ Online မှလည်း booking ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
No 25, Baho Road, 13 Ward, Hlaing Township, Yangon
အနီးအနား သီရိမြိုင်မှတ်တိုင် မှတ်တိုင်3မိနစ် လမ်းလျှောက်လျှင် ကြာချိန်
Grace K Beauty & Spa Grace K Beauty & Spa is located at No 25, Baho Road, 13 Ward, Hlaing Township, Yangon and opened since 2016 February. The salon offers numerous kinds of beauty related services such as Hair Cuts, Perm, Wax, Coloring, Shampooing, Straightening, highlight, Nail cleansing & Arts, facial cleansing and scrub, Casual Make Up, Bridal Make Up and more. You can booking online for reserved. Free Gifts for promotion programs are available.